Imigomo ehlobene nebhodi lesifunda eliguquguqukayo le-FPC - PCB Prototype, Fabrication, Factory, Supplier, Manufacturer
Isendlalelo esiningi se-PCB
Ngesandla Esiqinile Flex PCB
» Blog » Imigomo ehlobene nebhodi lesifunda eliguquguqukayo le-FPC
Imigomo ehlobene nebhodi lesifunda eliguquguqukayo le-FPC
I-FPC isetshenziswa kakhulu emikhiqizweni eminingi njengamaselula, ama-laptops, ama-PDA, amakhamera edijithali, i-LCMS, njll. Nayi eminye imigomo ejwayelekile ye-FPC.
1. Imbobo yokungena (ngembobo, imbobo engezansi)
Imvamisa ibhekisa ekusithekeni (ngembobo ezoshaywa kuqala) ebusweni bebhodi eliguquguqukayo, elisetshenziselwa ukulingana ebusweni besifunda sebhodi eliguqukayo njengefilimu yokushisela i-anti. Kodwa-ke, udonga lomgodi wendandatho yomgodi noma iphedi yokushisela eyisikwele edingekayo ekushiseni kufanele ivezwe ngamabomu ukwenza lula ukufakwa kwezingxenye. Okubizwa ngokuthi “umgodi wokufinyelela” ekuqaleni kusho ukuthi ungqimba olungaphezulu lunembobo yokudlula, ukuze umhlaba wangaphandle ukwazi “ukusondela” ekuhlanganiseni kwepuleti ngaphansi kwendwangu yokuvikela engaphezulu. Amanye amabhodi ama-multilayer nawo anezimbobo ezinjalo eziveziwe.
Kuyaziwa kakhulu ngokuthi i-polyacrylic acid resin. Amabhodi amaningi aguquguqukayo asebenzisa ifilimu yayo njengefilimu elandelayo.
3. Yesigcilikisha noma ingcina
Into, enjenge-resin noma yokumboza, evumela ukuxhumana okubili ukuqedela ukubopha.
Epuletini eliphakathi noma kuphaneli elilodwa, ukuze kwenziwe iphedi yokufaka insimbi yomgodi ibe nokubambelela okunamandla ebusweni bepuleti, iminwe eminingana ingaxhunywa esikhaleni esingeqile ngaphandle kwendandatho yomgodi ukwenza indandatho yomgodi ihlanganiswe kakhulu, ukunciphisa kungenzeka ezintantayo ebusweni ipuleti.
Njengenye yezimpawu zebhodi eliguqukayo eliguquguqukayo, isibonelo, ikhwalithi yebhodi eliguquguqukayo elixhunywe emakhanda wokuphrinta ama-computer disk drive izofinyelela “esivivinyweni sokugoba” sezikhathi eziyizigidi eziyinkulungwane.
6. Isendlalelo sokubopha ungqimba lwesibopho
Imvamisa ibhekisa kungqimba lokunamathela phakathi kweshidi lethusi kanye ne-polyimide (PI) substrate yocingo lwefilimu yebhodi le-multilayer, noma i-TAB tape, noma ipuleti lebhodi eliguquguqukayo.
7. Isembozo sekhava / ikhava
Okwesekethe elingaphandle lebhodi eliguquguqukayo, upende oluhlaza osetshenziselwe ibhodi elinzima akulula ukusetshenziselwa i-anti welding, ngoba ingawa ngesikhathi sokugoba. Kuyadingeka ukusebenzisa ungqimba oluthambile “lwe-acrylic” olunamathele ebusweni bebhodi, olungasetshenziswa kuphela njengefilimu yokushisela i-anti, kepha futhi ukuvikela isekethe elingaphandle, nokwenza ngcono ukumelana nokuqina kwebhodi elithambile. Le “filimu engaphandle” ekhethekile ibizwa ngokukhethekile ungqimba oluvikela ubuso noma ungqimba oluvikelayo.
8. Dynamic flex (FPC) board flexible
Kushiwo ibhodi lesifunda eliguquguqukayo elidinga ukusetshenziselwa ukunyakaza okuqhubekayo, njengebhodi eliguqukayo ekhanda lokubhala lediski yediski. Ngaphezu kwalokho, kune- “static FPC”, ebhekisa ebhodini eliguquguqukayo elingasasebenzi ngemuva kokuthi lihlanganiswe kahle.
9. Ifilimu yokunamathisela
Kushiwo ungqimba olubunjiwe laminated olomile, olungafaka ifilimu yokuqinisa indwangu yefayibha, noma ungqimba oluncane lwento yokunamathisela ngaphandle kwento yokuqinisa, efana nongqimba lwe-FPC.
I-Flexible circuit ephrintiwe, ibhodi eliguquguqukayo le-FPC
Ibhodi lesifunda elikhethekile, elingaguqula ukwakheka kwesikhala esinokubukeka okuthathu ngesikhathi somhlangano ongezansi. I-substrate yayo i-polyimide eguquguqukayo (PI) noma i-polyester (PE). Njengebhodi eliqinile, ibhodi elithambile lingenza ukuthi kufakwe izimbobo noma amapayipi wokunamathisela ebusweni ngokufakwa komgodi noma ukufakwa kokunamathisela ebusweni. Ingaphezulu lebhodi lingabuye linamathiselwe ngendwangu yesembozo esithambile yokuvikela kanye nezinjongo zokushisela ama-anti, noma iphrintwe ngopende oluhlaza oluthambile lokushisela i-anti.
11. Ukwehluleka kwe-Flexure
Okuqukethwe (ipuleti) kwephukile noma konakele ngenxa yokugoba nokuphinda okuphindiwe, okubizwa ngokuthi ukwehluleka okuguqukayo.
12. I-Kapton polyamide impahla ethambile
Leli igama lokuhweba lemikhiqizo kaDuPont. Luhlobo lweshidi le- “polyimide” lokuvikela izinto ezithambile. Ngemuva kokunamathisela ucwecwe lwethusi oluhleliwe noma ucwecwe lwethusi oluqhekekile, lungenziwa lube yinto eyisisekelo yepuleti eliguquguqukayo (FPC).
13. Ukushintsha ulwelwesi
Ngefilimu ye-Mylar esobala njengomthwali, unamathisela isiliva (unamathisela isiliva noma unamathisela isiliva) iphrintwa kusifunda esijiyile sefilimu ngendlela yokuphrinta kwesikrini, bese ihlanganiswa ne-gasket egobile kanye nephaneli eliphumayo noma i-PCB ukuze ibe “switch” noma ikhibhodi. Lo mshini omncane “okhiye” uvame ukusetshenziselwa ukubala okuphathwa ngesandla, izichazamazwi zikagesi, nezilawuli kude zezinto ezithile zasendlini. Ibizwa ngokuthi “ulwelwesi switch”.
14. Amafilimu ePolyester
Eyaziwa njengeshidi le-PET, umkhiqizo ojwayelekile weDuPont ngamafilimu eMylar, okuyinto enokumelana okuhle kagesi. Emkhakheni webhodi lesifunda, ungqimba oluvikelekile olusobala endaweni yokucabanga eyomile yefilimu nendawo yokumboza ubufakazi ebusweni be-FPC ngamafilimu e-PET, futhi angasetshenziswa njenge-substrate yesiliva yokunamathisela ifilimu ephrintiwe. Kwezinye izimboni, zingasetshenziswa futhi njengolwelwesi lokuvikela izintambo, ama-transformer, amakhoyili noma isitoreji se-tubular sama-IC amaningi.
15. I-Polyimide (PI) i-polyamide
I-resin enhle kakhulu eyenziwe ipholishwe yi-bismaleimide ne-aromaticdiamine. Yaziwa njenge-kerimid 601, umkhiqizo oyimpuphu oyinhlaka owethulwe yinkampani yaseFrance i “Rhone Poulenc”. UDuPont wayenza ishidi elibizwa ngeKapton. Leli puleti le-pi linokumelana okuhle nokushisa nokumelana nogesi. Akuyona into ebalulekile eluhlaza kuphela ye-FPC nethebhu, kodwa futhi nepuleti elibalulekile lebhodi elukhuni lempi kanye ne-motherboard ye-supercomputer. Ukuhunyushwa kwezwekazi kwalokhu okubalulekile yi- “polyamide”.
16. Reel ukwenza umsebenzi wokuxhuma kabusha
Ezinye izingxenye ze-elekthronikhi nezakhi zingakhiqizwa ngenqubo yokuhlehlisa nokuhoxisa i-reel (disc), njengethebhu, ifreyimu yokuhola ye-IC, amanye amabhodi aguquguqukayo (i-FPC), njll. qedela ukusebenza kwabo oku-inthanethi okuzenzakalelayo, ukuze konge isikhathi nezindleko zabasebenzi bokusebenza kocezu olulodwa.
Category Blog (666) Imininingwane Yenkampani (2) Imikhiqizo (112) FR-4 PCB (21) HDI PCB (14) I-PCB Esheshayo (5) IC Substrate (13) BGA (6) eMMc (1) Mini i-LED (2) SiP (1) IBhodi Lokuhlola (4) Imicrowave PCB (29) Imvamisa High PCB (26) Rogers PCB (18) I-PCB Yesikhashana (1) ITelfon PCB (5) Isendlalelo esiningi se-PCB (18) Umhlangano we-PCB (12) Ngesandla Esiqinile Flex PCB (15) I-PCB Ekhethekile (11)